Freeing Mind: August 2007
posted by BaganNat at 1:26 AM3comments
ဂီတရဲ့မှော်ဝင်စားသူ ဂီတပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ ထူးအိမ်သင် ကွယ်လွန်တာ ၃ နှစ်ပြည့်ပါပြီ..။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကိုဖိုးသားက ကိုပုဂံနတ် ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခု လုပ်ပေးပါလို့ ပြောပါတယ်..။ ကျွန်တော်လည်း အမှတ်တရ Wallpaper Design ကလေး မတောက်တခေါက်တတ်တဲ့ ဖိုတိုရှော့ ပညာရပ်နဲ့ ရေးဆွဲရပါတယ်..။ မနေ့ညကပါ..။ တစ်ပုံပဲဆွဲထားဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒီပုံကို www.htooeainthin.com ရဲ့ gallery မှာ တင်ထားလိုက်ပါတယ်..။ မနေ့က ကျွန်တော်နဲ့အတူ ကိုသခင်ကြီးလည်း ဆွဲထားတာလေးတွေ တွေ့ပါတယ်..။ ကိုသခင်ကြီးက ပုံနှစ်ပုံဆွဲပါတယ်..။
ဒါက ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးပါ..။
ဒီအောက်က Wallpaper Design နှစ်ခုကတော့ ကိုသခင်ကြီး ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးပါ..။ ကျွန်တော် အရမ်းသဘောကျပါတယ်..။
သုံးထားတဲ့ အရောင်.. စီစဉ်ပြီးဆွဲထားတဲ့ concept .. လုပ်ပြထားတဲ့ Design တွေက ကျွန်တော့်အပေါ် အတော်လေး စွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်..။ ကိုသခင်ကြီးရေ..။ Cheers ဗျာ..။ ရေလည် လေးစားတယ်...။
Labels: Design, HtooEainThin, Photo, Wallpaper
posted by BaganNat at 3:25 AM2comments
ကျွန်တော်အရင်က အင်တာနက်သုံးရင် ရှာရဖွေရတဲ့အလုပ် သိပ်ကို အချိန်ပေးရတယ်..။ Cyber Cafe' ကနေ အသုံးပြုတဲ့အချိန်တွေမှာ ပိုဆိုးပါတယ်..။ စရိတ်စက အလွန်အကျွံထောင်းပါတယ်..။ အိပ်ထဲပိုက်ဆံ အပြည့်ထည့်ထားနိုင်ရင်တော့ မဆိုးဘူးပေါ့လေ..။ ရသလောက် အချိန်ကလေး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ရှာရဖွေရတာ ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေ သုံးတာ ပိုကောင်းတာပေါ့..။ ကျွန်တော် အဲဒီနည်းလမ်းတွေ သုံးတယ်..။
အရင်တုန်းက Google Alert Service ကို သုံးထားပါတယ်..။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Keyword တွေနဲ့ရှာခိုင်းပြီး g-Mail ထဲကို ပို့ထားပေးလိုက်တာပါ..။ လုပ်တဲ့နည်းကလည်း တော်တော်လွယ်ပါတယ်..။ ဒီလင့်မှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး လုပ်ရင် Alert Service ကို ရောက်ပါတယ်..။ အဲဒီကနေ ကိုယ့်ရဲ့ Google Account နဲ့ Log In လုပ်ပြီး Manage လုပ်ပေးရုံပါပဲ..။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ သတင်းအချက်က Blog, News, Web, Group, Comprehensive ဆိုပြီး ရွေးထားပေးလို့ ရပါတယ်..။ ကိုက Technology ဆိုတဲ့ Keyword ကို News လို့ရွေးထားရင် Technology စာလုံးပါတဲ့ News Session က စာတွေ အကုန် ကိုယ့်ဆီကို ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်..။ ဒါက တစ်နည်းပေါ့..။
နောက်တစ်နည်းက iGoogle နဲ့ သုံးတာ..။ iGoogle ကျတော့ ကိုယ်လိုချင်တာတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် စာမျက်နှာသီးသန့်တစ်ခုအနေနဲ့ google.com မှာ ယူထားတာမျိုးပါ..။ များသောအားဖြင့် မစိမ်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်..။ Google ဟာ အချိန်အကုန်အကျ သက်သာပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Information တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် စုစည်းလို့ရအောင် လုပ်ထားပေးတဲ့ Service ဖြစ်ပါတယ်..။
ကျွန်တော် ဒီအသုံးချနည်းလေးကို အချိန်လုပြီး အင်တာနက်သုံးနေရတဲ့ ဗဟုသုတရှာဖွေသူ၊ ဗဟုသုတ ဖြန့်ဝေဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေအတွက် လက်တို့ချင်ပါတယ်..။ ပထမဆုံး လိုအပ်ချက်က Google Account ရှိနေဖို့လိုပါတယ်..။ Google Account နဲ့ g-mail တို့ Blog တို့ လုပ်ရပါတယ်..။ Google Account ဟာလည်း အင်တာနက် သုံးတဲ့သူ တော်တော်များများမှာ ရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။ မရှိသေးရင်တော့ Register လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်..။
www.google.com ကို Address Bar မှာရိုက်ပြီး ၀င်ပါ..။
Google web site တက်လာတယ်ဆိုရင် ညာဘက်ထောင့်မှာ iGoogle ဆိုတာလေး ပါပါတယ်..။ အဲဒီမှာ Click လုပ်ပြီးဝင်ပါ..။ ဒါဆိုရင် အောက်က စာမျက်နှာမျိုး တက်လာပါလိမ့်မယ်..။
အဲဒီမှာ Make it your own ဆိုပြီး အပေါ်မှာရေးထားပါတယ်..။ အဲဒီစာကြောင်းရဲ့အောက်မှာ Already haveapage? Sign in to see your stuff ဆိုတဲ့စာသားလေးလည်း ပါပါတယ်..။ Make it your own ဆိုတာမှာ Click လုပ်ပေးပါ..။ တကယ်လို့ Account ရှိပြီး ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဆိုရင်တော့ အဲဒီမှာ click လုပ် google account မှာ Sign in လုပ်လိုက်ရင် ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ page တန်းတက်လာပါလိမ့်မယ်..။ အခုလောလောဆယ်တော့ စလုပ်တဲ့နေရာကပဲ စတာပေါ့..။ Make it your own ဆိုတဲ့ လင့်မှာ ကလစ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် အောက်က စာမျက်နှာ ကျလာပါလိမ့်မယ်..။
အဲဒီစာမျက်နှာမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Service တွေကို Click လုပ်ပါ..။ ပြီးရင် Show My Page မှာ Click လုပ်ပါ..။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပဲ စုပြီး တစ်မျက်နှာတည်းမှာ လာပြပါလိမ့်မယ်..။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ page design ကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပြီး အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ပြီး ကြည့်လို့ရပါပြီ..။
တစ်ခု သတိထားရမှာက အဲဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့ စာမျက်နှာကို ကိုယ်အဲဒီကွန်ပျူတာကနေ ထွက်သွားတာနဲ့ ကျန်ခဲ့မှာပါ..။ ဒါကို ဘယ်လိုသိမ်းမလဲဆိုရင် ကိုယ့် Google Account နဲ့ log in လုပ်ထားစဉ်မှာ ပြင်ဆင်ထားတယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်း အင်တာနက် အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဘယ် Computer မှာမဆို Google Account ကို log in လုပ်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်..။ အောက်က ပုံကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Account လုပ်ထားပုံကို ပြထားတာပါ..။
ကိုယ့်အတွက် သီးသန့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍလေးတွေ ခွဲထုတ်ထားချင်တယ်ဆိုရင် Tab ကလေးတွေနဲ့ ခွဲထုတ်ထားလို့ ရပါတယ်..။ ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Addatab မှာ Click လုပ်ပါ..။ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ Tab Name ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး Google က သူ့ရဲ့ Available ဖြစ်တဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Service တွေကို ထပ်ပေါင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
တကယ်လို့ Add Button မှာ နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Box ကလေးတစ်ခု တက်လာပါမယ်..။ Tab Name ကို ကိုယ်ပေါင်းထည့်ချင်တဲ့ Tab နာမည်ရိုက်ထည့်ပါ..။ News ဆိုရင်လည်း News ပေါ့..။ ကျွန်တော် လောလောဆယ် Web Design ဆိုတာပဲ ပေါင်းထည့်ထားပါတယ်..။ ပြီးရင် I'm feeling lucky. ဆိုတဲ့ Check box မှာ click နှိပ်ပြီး OK မှာနှိပ်လိုက်ရင် Tab အသစ်တစ်ခု ထပ်ပေါင်းထည့်ပေးသွားတဲ့အပြင် လိုအပ်တဲ့ stuff တွေပါ ထည့်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်..။
အဲဒါကိုမှ မကြိုက်သေးဘူး လိုအပ်ချက်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်..။ Add Stuff မှာနှိပ်ပေါ့..။ ပြီးရင် main page ကိုပြန်သွား..။ ကျန်တာတွေကတော့ အလွယ်တကူလုပ်လို့ ရမှာပါ..။ ကိုယ်ရွေးချယ်ထည့်သွင်းတဲ့ Staff တွေပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ့် page အသုံးတည့်မှာ သေချာပါတယ်..။
Interface Design ပြင်ဖို့အတွက် support လုပ်ပါသေးတယ်..။ အဲဒီ theme လေးတွေက အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းပါတယ်..။
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပုံမှာ Click လုပ်ပြီး Save လုပ်ပါ..။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Theme ကို ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်..။ ဒီ Setting တွေဟာ google account log in လုပ်ထားချိန်မှာ ပြင်ဆင်တာ ကောင်းပါတယ်..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကို Google က သိမ်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဘယ်စက်မှာမဆို ဘယ်နေရာမှာမဆို Sign in လုပ်တာနဲ့ ကိုယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်း တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ နောက်တစ်ခုက Google Talk ကိုလည်း အဲဒီပေါ်မှာ ထည့်သွင်းလို့ရပါသေးတယ်..။
Labels: Google, Literal, Notes, Technology
posted by BaganNat at 6:28 AM 1 comments
posted by BaganNat at 6:51 AM2comments
အနော်ရထာ မင်းစော (၃၇၅-၄၃၀)
ပထမ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အရည်းကြီးတို့ဝါဒ နှိမ်နင်းရာ၊ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားစေခဲ့သည်။ ဆည်မြှောင်း ကန်ချောင်းတို့ တည်ဆောက်ရာ၊ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး စနစ်ကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ထွန်းကားရေးကို ဆက်လက်အားပေး၍ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဥာဏ်အမျှော်အမြင် ကြီးမားသော မင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းတပါးနှင့် ချစ်ကြည်စွာ ဆက်ဆံ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်အတွက် ဆည်မြောင်း ချောင်းကန်တို့ကို ဆည်ဖို့ပြုပြင်ခြင်း၊ အလေးချိန် ငွေကြေး အချင်အတွယ် စသည်တို့ကို တညီတညွတ်တည်းဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သာသနာတော် စည်ပင်ပြန့်ပွားရေးအတွက် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်သို့ လှည့်လည်ကာ စေတီပုထိုးများ တည်ထားခဲ့သည်။
ဒုတိယ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို အကျယ်ဝန်းဆုံး ဖြန်ကျက်ခဲ့၍ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သော စစ်ရေး။ စည်းရုံးရေးနှင့် ရဲစွမ်းသတ္တိပြည့်စုံသည့် စစ်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်ကို အရှေ့တောင်အာရှတွင် စစ်အင်အား အခိုင်ခန့်ဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားတည်ထောင်ခဲ့သည်။
သာလွန်မင်းသည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အေးချမ်းသာယာရေးကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်တကျ ရှိစေရန် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ပထမဆုံး စစ်တမ်းကောက်ယူသော မင်းတစ်ပါးဖြစ်သည်။
တတိယ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ထူထောင်ခဲ့သူ အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျသည် အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို ဆောင်ရွက်၍ ကဗျာစာပေများကို ချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့စစ်အင်အားနှင့် တန်ခိုးသြဇာ ပြန်လည်ကြီးမားလာစေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဘိုးတော်ဘုရားသည် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အခွန်ကောက်ခံရေး စနစ်ကျစေရန် စစ်တမ်းနှစ်ကြိမ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ နိုင်ငံအ၀ှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းကျောက်စာများကို စုစောင်းသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ နာမည်ကျော် မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးကို သွန်းလုပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
အမရပူရခေတ် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံပြီး ထင်ရှားကျော်ကြားသော စစ်သေနာပတိချုပ် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ပထမ စစ်ပွဲတွင် ဗြိတိသျှတို့၏ နယ်ချဲ့ရန်ကို စွမ်းစွမ်းတမံ တိုက်ခိုက်ခဲ့သော ဂုဏ်ယူထိုက်သည် အာဇာနည် သူရဲကောင်းတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်..။
ရတနာပုံခေတ် အိမ်ရှေ့စံမင်းသားကြီး ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်မှီတိုးတက်ရန် စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးပမ်းခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ စက်မှု လက်မှု ထွန်းကားရန်၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး ခေတ်မှီစနစ်ကျရန်နှင့် လက်နက်အင်အား တောင့်တင်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
Labels: History, Myanma History, Notes
posted by BaganNat at 5:42 AM0comments
ကိုမောင်လှရဲ့ Blog ကို ကျွန်တော် ရောက်တတ်ပါတယ်..။ သူ့ cBox မှာ ဘယ်သူတွေ ၀င်ပြောသလဲဆိုတာပါ ကြည့်မိ ဖတ်မိ သတိထားမိပါတယ်..။ villager ဆိုတဲ့ Blogger တစ်ယောက် eot ထည့်ဖို့ နေရာ ရှာမရဖြစ်နေလို့ Declaration လုပ်တဲ့နည်းကို cBox မှာ ကျွန်တော်ပြန်ရေးသွားပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် သူအဆင်ပြေပုံမရဘူး..။ ဒီတော့ ကျွန်တော် ကိုမောင်လှဆီက စာကို ပြန်ယူရေးရတော့မယ်..။ (အစ်ကိုရေ.. ညီအစ်ကိုချင်း ကူညီတယ်လို့ပဲ သဘောထားဗျာ.. နော)
Edit HTML ထဲမှာ ကိုမောင်လှလုပ်ထားပေးတဲ့ eot လမ်းကြောင်းနဲ့ သုံးတဲ့ပုံကိုပဲ ကျွန်တော် ပြန်ယူသုံးပါမယ်..။ အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ကုဒ်ကို Copy လုပ်ပါ..။
ပြီးရင် Edit HTML ကိုသွားရပါမယ်..။ အဲဒီမှာ အောက်ကပြထားတဲ့ပုံအတိုင်း ထည့်ပါ..။ ပြထားတဲ့ နေရာမှာ ထည့်ရင် ရပါတယ်..။ အပေါ်နားလေးမှာ text/css ဆိုတာလေး ပါပါတယ်..။
တစ်ခု ပြောချင်တာက eot က IE မှာပဲလုပ်တယ်..။ တခြား Browser တွေမှာ အလုပ်မလုပ်ဘူး..။ နောက်ပြီး eot ထည့်ဖို့လည်း သိပ်မလိုတော့ဘူးလို့ ယူစမိတယ်..။ အင်တာနက် သုံးတဲ့သူ မြန်မာတော်တော်များများ Zawgyi-One Install လုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ..။ ကျွန်တော့် eot က အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး..။ ကျွန်တော် ပြန်လည်း ပြင်မထားဘူး..။ ဒီအတိုင်းပဲ ထားထားပါတယ်..။ မလိုဘူးထင်လို့ပါ..။
အခုထည့်ရမယ့် နေရာပြောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ ယူစပါတယ်..။ xml မှာလည်း အလုပ်လုပ်ကြောင်းပါ..။
Labels: eot, Notes, Technology
posted by BaganNat at 10:56 PM0comments
ကျွန်တော် အင်တာနက်ပေါ် ဟိုလျှောက်သွား ဒီလျှောက်သွား လုပ်ရင်းကနေ ပုံလေးတွေ တွေ့လာတာပါ..။ ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက် မဟုတ်သလို ဓါတ်ပုံလည်း ကောင်းကောင်းမရိုက်ဖူးပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတွေက သိပ်ကိုတော်တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်..။ ကျွန်တော် အခုလို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူနေတဲ့ ပုံတွေကို မြင်တော့ သူတို့ကို သတိရမိတယ်..။ ဒီအတွက် ကျွန်တော် ဒီပုံလေးတွေကို ဘလော့မှာ တင်ပေးတာပါ..။
အပေါ်က ပုံကိုမြင်တော့ Lens တွေအကြောင်း ပြောပြတတ်တဲ့ ကိုသခင်ကြီး (ကိုဂျေ)တို့၊ ကိုမောင်လှတို့ ကိုသတိရမိတယ်..။ သူဆိုရင် ဒီလို ကင်မရာ ဒီလို Lens တွေနဲ့ ဓါတ်ပုံလှလှတွေ ရိုက်ယူမလား မသိဘူး..။ သိပ်လည်း လိုချင်မယ် ထင်မိတယ်..။ ထီပေါက်ရင် မ၀ယ်လောက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထင်ပါရဲ့ဗျာ..။
အပေါ်က လူကို ကြည့်ပါဦး..။ ရုတ်တရက်ဆိုရင် စနိုက်ပါသမားများလား မှတ်ရတယ်..။ ခဲရာခဲဆစ်ကို ရိုက်ယူရတယ်ဆိုတာ သိပ်ကို ပေါ်လွင်တာပေါ့ဗျာ..။ ဒီလူတွေ သူတို့ရဲ့ ၀ါသနာအရ လုပ်တာ..။ အနုပညာတစ်ခု ဖန်တီးတာ..။ ဒါပေမယ့် ပေးဆပ်ရတာ သိပ်များလွန်းတယ်..။ အဲဒီအပြင် သူတို့လည်း ရသင့်ရထိုက်သလောက် အခုဆို ရနေကြပြီပေါ့လေ..။
သူတို့တွေ အဲသလိုရိုက်နေတော့ မြန်မာ့ဓါတ်ပုံဆရာတွေလည်း ဘယ်လိုခဲရာ ခဲဆစ်နဲ့ ရိုက်ယူသလဲ..။ ဒါ့အပြင် ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုဖန်တီးမှုအတွက် ဘယ်လိုများ အသုံးချပြီး ရိုက်ရသလဲ..။ အဲဒါအပြင် ဘယ်သူတွေကရော ဘယ်လောက်အထိ အသိအမှတ်အပြုခံရပြီး အကျိုးအမြတ် ခံစားရသလဲဆိုတာ သိချင်မိတယ်..။
အပေါ်က ပုံလေးက အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သူလိုချင်တဲ့ ရှု့ခင်း ရှု့ကွက်ကလေးကို ရိုက်ကူးနေတာပေါ့..။ ရေတွေ..။ နိမ့်ရာကို စီးလာတဲ့ရေတွေမှာ ဘာတွေကများ သူမကို ဖမ်းစားထားလဲ မသိဘူး..။ အမျိုးသမီး ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်အတွက် သိပ်ပင်ပန်းလွန်းမလား မပြောတတ်ဘူး..။ ဒါလည်း ၀ါသနာဆိုတဲ့အရာလေးက သူတို့ရဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲကို မေ့ဖျောက်ပစ်လိုက်တာ ထင်ပါရဲ့..။
ကြိုးစားမှုရှိချင်ရှိလိမ့်မယ်..။ အခွင့်အရေးမရှိရင် အလကားပါလေ..။ တော်ချင်တော်လိမ့်မယ်.. အခွင့်အရေးအရေး မရှိရင် အလကားပဲပေါ့..။ ဘာတွေ ဘယ်လောက်တော်နေ တော်နေ ရေခံမြေခံ တစ်နည်းပြောလို့ရမယ့် ပါတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ ကိုယ်ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးရမှာသာ ကိုယ်ဟာ ဘာဆိုတာ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလား..။
လူတစ်ယောက် မပြောပါနဲ့..။ သစ်စေ့လေးတစ်စေ့ကနေ သစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်ဖို့အတွက် နေ၊ရေ၊လေ၊မြေ တွေ သင့်တင့်စွာပေါင်းစပ်မှ ဖြစ်လာတာမျိုးပေါ့..။ လူတစ်ယောက် ဘယ်လောက်အောင်မြင်သလဲ.. ဘာဖြစ်သွားသလဲ ဆိုတာ သူ့ဝန်းကျင်နဲ့ သိပ်ကို သက်ဆိုင်တာပဲလေ..။
သိပ်တော်ပါတယ်.. သိပ်ကိုလည်း ထက်မြက်ပါတယ်.. သိပ်လည်း ထူးချွန်ပါတယ်.. သိပ်လည်း အောင်မြင်ပါတယ်.. သိပ်ကို ယုံကြည်ဖို့ ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်း အခြေအနေ မရှိ အခွင့်အလမ်း မရှိရင် အဲဒီဟာတွေ အလကားပါပဲ..။
Labels: Photo, Photographer, Thought
posted by BaganNat at 6:32 AM2comments